Sideen U Dhisay Hal Milyan oo Doolar Oo Ganacsi B2B Ah Video LinkedIn | | Martech Zone
Fiidiyowgu wuxuu si adag u kasbaday booskiisa oo ah mid ka mid ah qalabka suuqgeynta ugu muhiimsan, leh 85% ganacsiyada iyagoo adeegsanaya fiidiyow si ay u gaaraan himilooyinkooda suuq-geyn. Haddaan eegno suuqgeynta B2B, 87% ka ganacsadayaasha fiidiyowga waxay ku sifeeyeen LinkedIn inay tahay kanaal wax ku ool ah oo lagu hagaajiyo sicirka beddelaadda.
Haddii ganacsatada B2B aysan ka faa'iideysan fursaddan, si dhab ah ayey u tebayaan. Aniga oo dhisaya istaraatiijiyad sumadeyn shakhsiyadeed oo udub dhexaad u ah fiidiyowga LinkedIn, waxaan awood u yeeshay inaan ganacsigeyga ku koro wax ka badan hal milyan oo doolar maalgelin la'aan.
Abuuritaanka fiidiyoow wax ku ool ah oo loogu talagalay LinkedIn ayaa ka baxsan heerka caadiga ah suuq geynta talobixinta fiidiyowga. Fiidiyowyada 'LinkedIn' waxay u baahan yihiin in la abuuro oo si khaas ah loogu hagaajiyo barxadda si loo gaadho dhagaystayaasha saxda ah isla markaana loo sameeyo saamayn dhab ah.
Waa tan waxa aan bartay (iyo waxa aan jeclaan lahaa in aan ogaado) adeegsiga fiidiyowga LinkedIn si aan u dhiso shirkad B2B ah.
Waxaa iga go'an kor u qaadista ciyaarta fiidiyowga ee LinkedIn qiyaastii laba sano ka hor. Waxaan ku dhexjiray abuurista fiidiyowyo loogu talagalay qoraalada shirkadda, laakiin sumcadda shaqsiyadeed gebi ahaanba aniga way igu cusbeyd. Waxaan u maleynayay inaan abuurayo fiidiyowyada 'LinkedIn' ee loo baahan yahay istaagidooda oo qumman xagga hore ee sabuuradda oo ka baaraandegaya (si cad u qoran) aqoonta suuq geynta. Waxaan beddelay istiraatiijiyadeydii waxaanan bilaabay inaan abuuro fiidiyowyo aan caadi ahayn oo si fudud uga hadlaya qaybaha warshadaha ee aan aqaan oo aan jeclahay.
Halkii aan diirada saari lahaa iibinta ganacsigeyga, waxaan diirada saaray inaan keeno dhab ah qiimo u leh dhagaystayaashayda. Waxaan sii waday abuurista fiidiyowyo dheeri ah, anigoo isu aasaasaya inaan ahay khabiir maado ku xeel dheer suuqgeynta, ganacsiga, maamulka iyo hal abuurnimada. Iyada oo loo marayo dhajinta joogtada ah iyo isdhexgalka joogtada ah, waxaan si aad ah u kordhay dhagaystayaashayda bilaha soo socda: hadda waxay gaadhay 70,000 oo raacsan!
Istiraatiijiyaddayda fiidiyowga (iyo rabitaankeyga inaan waxoogaa shakhsi ah helo) ayaa lagu bixiyay qaab tan oo ah hoggaamiyeyaal cusub. Aniga oo banaanka isa saaraya oo ka hadlaya noloshayda, dadku way i bartaan, gaadhaan haddii ay u maleeyaan inay ku habboon yihiin inay nala shaqeeyaan, habka iibkuna wuxuu u dhaqaajiyaa hillaac si dhakhso leh. Waqtiga rajadaas 'LinkedIn' ay bilaabeen booqashada websaydhka shirkadayda ama ay ila soo xidhiidhayaan, waxay hore u ahaayeen hogaamiyeyaal diiran. Ilaa hadda, shirkaddaydu waxay saxiixday in ka badan hal milyan oo doolar qandaraasyo laga helo hage ka yimaada LinkedIn.
In kasta oo aan caawimaad ka haysto koox fantastik ah oo kobcisa hoggaamiyeyaashaas, jiilka hoggaamintu waa tallaabo ugu horreysa oo weyn-waxayna u baahan tahay istiraatiijiyad fiidiyow oo LinkedIn ah oo adag.
U Sheegida Sheeko Muuqaal ah
Fiidiyowyada LinkedIn waa hab fiican oo loo sheego sheekooyin soo jiidasho leh, oo muuqaal ah ku saabsan astaantaada gaarka ah iyo ganacsigaaga. In kasta oo labada qaabba ay fiican yihiin, haddana waxaad inta badan wax badan oo ku saabsan astaantaada ku soo gudbisaa fiidiyoow intii aad ku qori lahayd boostada.
Qiimaha fiidiyowgu wuxuu kujiraa waxa aad awoodid inaad ugu gudbiso muuqaal ahaan / maqal ahaan. Fiidiyowgu wuxuu dadka u oggolaanayaa inay kula xiriiraan oo ay xitaa ku bartaan maxaa yeelay waxay wax ka soo qaadan karaan macluumaadka luqaddaada jirka iyo habka aad ugu hadasho. Dad badan ayaa ii sheegay inay dareemayaan inay mar hore i garanayaan daawashada fiidiyowyada aan ku wadaago LinkedIn.
Fariin isku mid ah ayaa si aad u kala duwan loo heli karaa markaad maqasho codka qofka hadlaya iyo dareenkiisa. Warbaahinta bulshada ayaa xudun u ah qoraallada qoraallada xambaarsan, laakiin fiidiyowgu wuxuu dareemayaa inuu yahay mid dhab ah. Fiidiyowgu sidoo kale wuxuu barbardhigayaa "muuqaalka muuqaalka" ee warbaahinta bulshada noqotay. Waa inaad heshaa qoob yar, wax yar oo dhab ah si aad ula wadaagto fiidiyow-cashar aan si isdaba joog ah u bartay sanadkaan la soo dhaafay aniga oo duubaya fiidiyowyo seddex caruur ah oo wax ka baranaya guriga asalka.
Kordhinta Dhageystayaashaada Wanaagsan
Isla dhaqanka ugu fiican ee aan ku dabaqno kanaallada kale ee suuqgeynta ayaa halkan ka khuseeya, sidoo kale; taas oo ah, inaad noqotid istaraatiijiyad ku saabsan dhageystayaashaada, waana inaad dadka siisaa sabab ay ku daryeelaan.
In kasta oo aan jecel nahay inaan ka fikirno tuurista shabaq ballaadhan ayaa dhalin doonta hoggaaminno badan, waan ognahay in taasi run ahayn. Waxaad ubaahantahay inaad si ula kac ah ugahadasho dhagaystayaashaada markaad abuureyso fiidiyowga LinkedIn. Yaad la hadlaysaa In kasta oo ay tahay inaad had iyo jeer toos uguxiriso qoraal shaqsi gaar ah, inaad yeelato dhagaystayaal qaas ah maskaxdaada oo aad si toos ah ulahadleyso inta filimku socdo waxay kaa caawin doontaa inaad farsameyso waxyaabo badan oo kugu kalifaya.
Marka aad go’aamiso qofka aad la hadlayso, waxaad u baahan tahay farriin la jaan qaadi doonta. Waad ogtahay waxa hubaal ah inaan dib loo eegi doonin? Tilmaanta alaabtaada ama adeeggaaga. Waxaad u baahan tahay inaad dadka siiso a sabab daryeel ku saabsan shirkaddaada ka hor intaadan ka hadlin. Xoogga saar abuurista nuxur waxbarasho oo leh wax yar oo ku saabsan shirkaddaada.
Kahor intaadan bilaabin duubista filimka, isweydii:
Maxay dhagaystayaashaydu daneeyaan?
Maxay dhagaystayaashaydu ka walwalayaan?
Maxay dhagaystayaashaydu rabaan inay wax ka bartaan LinkedIn?
Xusuusnow: kobcinta dhagaystayaasha ma istaageyso markaad garaacdo 'Post.' Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ku dhisto dhagaystayaashaada dhabarka dambe adoo la falgalaya (oo aad si dhab ah u danaynayso) suuqaaga bartilmaameedka ah.
Si loo hubiyo in dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee aad tilmaamtay ay dhab ahaantii arkayaan fiidiyowgaaga, waxay kaa caawinaysaa inaad ahaato isku xirnaanta marka hore. Aniga iyo kooxdaydu waxaan tan ku sameeynaa iyada oo la abuurayo liisaska rajooyinka ee warshad kasta oo aan ku martiqaadno inay ku soo biiraan shabakadahayaga si ay u arki karaan waxayaga ku jira quudintooda. Waxay si joogto ah u xasuusinayaan sumadeena iyo qiimaheena iyada oo aanan u baahnayn inaan wax iska iibino.
Abuuritaanka Istaraatiijiyadaada Muuqaalka LinkedIn
Diyaar ma u tahay inaad bilowdo sameynta fiidiyowgaaga 'LinkedIn' si aad u dhisto astaantaada gaarka ah iyo shirkaddaada? Ha u dhididin - way fududahay inaad aad u bilowdo intaad moodayso.
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka aan ka bartay ee ku saabsan sameynta fiidiyowga LinkedIn ee wax ku oolka ah 2-dii sano ee la soo dhaafay - oo ay ku jiraan 10 bilood oo ah soosaarid fiidiyoow ah inta lagu jiro aafada:
Ha ka fikirin. Kaliya kamaradda daar oo toog. Xitaa ma daawado fiidiyowyadeyda gaarka ah maxaa yeelay waan is kala qaadan doonaa.
Share posts subaxdii. Waxaad arki doontaa hawlgal aad u badan subaxdii marka loo eego fiidkii.
Kudar subtitles Dadku waxay daawan karaan taleefankooda ama kuwa kale, waxayna doorbidi lahaayeen inay wax akhriyaan intii ay dhagaysan lahaayeen. Sidoo kale waa marin-u-helista ugu fiican.
Ku dar cinwaan. Intaad kudareyso subtitles, kudar cinwaan fiiri fiidiyowgaaga
Shaqsi hel. Qoraalladayda si wanaagsan wax u qabtay waxay ku saabsanaayeen guuldarro, iyagoo ka tarjumaya horumarka iyo xallinta xaaladaha adag.
Noqo asalka. Waxaan ku tijaabiyay dhajinta taxanaha fiidiyowga laakiin inaan helo wax cusub oo aan iraahdo (oo leh cinwaano iyo thumbnails kala duwan) ayaa ah tan ugu mashquulsan.
Kudar nuqul. Dadku ma daawan karaan fiidiyowgaaga oo buuxa, waana taasi ok! Sii iyaga sabab ay ku sii joogaan boostadaada oo ay ku galaan adoo ku daraya nuqul soo jiidasho leh.
Si aad u kobciso astaantaada B2B oo aad u sii tartanto, waxaad u baahan tahay inaad adeegsato fiidiyowga 'LinkedIn'. Marka indhaha isku qabo oo boodi! Marka aad bilowdo dhajinta, ma rumaysan doontid inaadan horay u soo dhigin.
Raac Jackie Hermes LinkedIn
Tags: b2bvideo b2bIstaraatiijiyada fiidiyowga ee b2bhermes jackieLinkedInkuwa raacsansuuqgeynta ku xiranvideo ku xiranqiimahasuuqgeynta fiidiyowgasheeko muuqaal ah
Sida ay Daabacayaashu u Diyaarin Karaan Tiknoolajiyad Teknoolojiyad ah si ay u gaaraan Dhageystayaal aad u kala daadsan
Talo: Sida Loo Helo Sawirro Muuqaallo la mid ah Kaarkaaga Sawirka Hantida ah ee leh Raadinta Sawirka Google